Vaovao - miresaka momba ny fahaizana mampiasa router cnc hazo
Miresaka momba ny Fampiasana fahaiza-manao router cnc hazo
Rehefa mampiasa ny router cnc hazo, tsy azo ihodivirana ny tsy hihaonantsika amin'ny asa sasany manahirana, izay mandany fotoana sy miasa, izay tena mampiahiahy. Raha ny marina, rehefa mampiasa arouter cnc hazo raha hanao an'io karazana asa io dia misy ny fahaiza-manao azo arahana ary ireo fahaiza-manao ireo dia mety hahatonga ny asantsika hahomby kokoa. Andao hianatra fahaiza-manao vitsivitsy eto amintsika ankehitriny.
1. Fanoratana sokitra plastika
Ho an'ny firafitra plastika sokitra dia azonao atao ny mametaka ny kasety fandefasana ao ambadiky ny zavatra voasokitra, ary avy eo atsipazo amin'ny sisiny amin'ilay fantsom-panafody ranoka ny sisiny, ary apetaho eo amin'ny faritra azo ariana, mba hisorohana ny fampiasana kasety roa sosona. Mamela tampon-tany sarotra diovina izy io.
2. Fametahana sary sokitra miendrika tsy ara-dalàna
Ho an'ireo zavatra voasokitra manana endrika tsy ara-dalàna, dia toa voafatotra mafy ety ambonin'ny tany izy ireo, ary hihozongozona sy hivoahana rehefa iharan'ny tsindry midina. Amin'izao fotoana izao dia azonao atao ny manandrana mametraka fako ao ambanin'ilay zavatra hampitombo ny fikorontanana. Ny iray hafa dia ny fitazonana ireo fonosana miaraka amin'ilay entana. Na dia miendrika tsy ara-dalàna aza ilay zavatra, ny fonosana entiny dia mety ho tena ara-dalàna ary mora raikitra. Manampia tady kely hanaovana zavatra tsy miovaova. Mora ny manamboatra.
3. Fanamafisana ny zavatra voasokitra
Satria ny milina fanaovana sokitra vita amin'ny hazo dia matetika ampiana pliers na chucks marobe, ary vita amin'ny vy izy ireo, dia mora ny manimba ny zavatra voasokitra na mampanjavona azy mandritra ny fizotran'ny sokitra, koa misafidiana kapila vita amin'ny fingotra na fantsom-pohy ho an'ny The ny fametahana ilay zavatra voasokitra dia hamaha io karazana fahasimbana io amin'ny lafiny iray.